Folder ပြဿနာ — MYSTERY ZILLION
August 2009 edited October 2009 in Help Desk
၁ ကျွန်တော့်စက်မှာ ဖိုဒါတစ်ခုကိုဖွင့်ရင် နောက်၀င်ဒိုးအသစ်ပေါ်လာပြီးပွင့်တယ်။ ပြီးတော့ Back , Forward တွေလုပ်ရင်လဲအဲလိုပဲ။ အမှန်ဆို ၀င်းဒိုးတစ်ခုထဲအတွင်းမှာပဲပေါ်ရမှာလေ။ အဲဒါ ဗိုင်းရပ်ကိုက်တာလား ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြောပေးပါအုံး။
၂ ဖိုဒါကို ဖွင့်ရင် Double Click မလိုပဲ တစ်ချက်ထဲနဲ့ပွင့်တယ်။ အဲဒါကိုလဲပုံမှန်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဘာ antivirus သုံးပြီးသတ်ရမလဲ ။ ပြောပြပေးကြပါ။ :77:
pawpaw wrote: »
အဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ Virus ကိုသတ်ချင်ရင်တော့ ဒါးနဲ့ခုတ်သတ်မှရမယ် вЂ¦
စက်ကိုတစ်ယောက်ယောက်၀င်ကလိသွားတာပါ။ ဒီလိုပြန်လုပ်လိုက် вЂ¦.
၁ Folder Option ကိုသွား вЂ¦ General Tab မှာ .. ဒုတိယအကွက် Browse Folders မှာ Open each folder in the same window ကို Tick ပေးထား
၂ Click items as follows မှာ Double-Click to open an item (single-click to select) ကို Tick ပေး
ပြီးရင် OK လိုက်တော့ вЂ¦ ရပြီ вЂ¦
အဲဒါမှ မOK ရင် ငါ့ရုံးသာ စက်ကိုမလာခဲ့တော့ вЂ¦ ငါ အခု မော်ကျွန်းမှာရောက်နေတယ်။
UNDP နဲ့ FRC ၄လမ်းပဲခြားတယ်နော် вЂ¦. :P
Folder ကို တစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့ ပွင့်တယ်ဆိုရင်
Control Panel ထဲက Folder Options ကို ဖွင့်ပြီး General Tab အောက်က Click Items as follow box ထဲမှာ
double-click to open an item (single-click to select) ကို click ပြီး OK နှိပ်လိုက်ပါ။အဆင်ပြေသွားမှာပါ။
နန်း စက်ကတော့ ဖိုဒါကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်လေ .. အရင်က Open ကို default အလုပ်လုပ်ပေမယ့် အခု open with ACD see ဖြစ်နေတယ်။ဘယ် folder ကိုမဆို double click လုပ်လိုက်တာနဲ့ ACD see ကအရင်ပွင့်လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ACD see ကိုဖြုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ ဒါလဲသူက ပြောင်းသွားတယ် open with one note ဆိုပြီး ဖွင့်လိုက်တိုင်း one note ကအရင်ပွင့်လာတယ်။ စိတ်ညစ်တယ် .. :2: အခု ဖိုဒါ တစ်ခုဖွင့်ချင်ရင် right click> open ဆိုပြီး တစ်ဆင့်ခြင်းဆီသွားနေရတယ် .. အဲဒါ ဘယ်နားမှာ ပြန်ပြင်လို့ရလဲဟင် .. ၀ိုင်းဖြေပေးကြပါအုံး .. MZ မှ အကို၊ အမ၊ ညီ၊ ညီမ တွေသိတဲ့သူများကူညီကြပါနော် .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... :103:
နန်း စက်ကတော့ ဖိုဒါကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်ရင်လေ .. အရင်က Open ကို default အလုပ်လုပ်ပေမယ့် အခု open with ACD see ဖြစ်နေတယ်။
virus ကိုက်သွားတာပါwindows repairပြန်လုပ်တာ၊ပြန်တင်တာကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်
ဗိုင်းရပ်ကိုက်တယ်ဆိုတောင် သတ်လည်း ဗိုင်းရပ်စ် သေသွားတာ ပဲ ရှိ်မယ် Bro ရ..။ (ပြောကြည့့်တာ..:P:P) ဗိုင်းရပ်စ်သေသွားလို့ပြန်ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး... သူဒုက္ခပေးပြီးသလောက်ကို ပြန်ပြင်မှရမှာ...:)
အကို အဲ လို ဖြစ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလည်း...:106:
မကြာသေးဘူးဆိုရင် System Restore လုပ်ကြည့်ပါလား...Tuneup Utilities 2009 ကို သုံးပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရတယ်... အဲလိုလုပ်ခဲ ့ဖူးလို့တင် ပြတာ ပါ.. ရရင် အမြတ် မရရင် တော့အရင်းပေါ့နော်... :D
Virus ကိုက်တာမဟုတ်ဘူး အိချမ်းပို :P
Alexander ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာ အဆင်ပြေသွားပြီ။ တစ်ယောက်ယောက် ကလိသွားတာနေမှာ။
အကိုလို့ခေါ်နေတော့ I ကိုမမှတ်မိဘူးထင်တယ်။ အရင် မော်ကျွန်း UNICEF ကလေ Alexander နဲ့တူတူပဲ။ ဂျီတော့မှာ chat ဖူးတယ်လေ။
HappyMonkey က အိချမ်းပိုမှန်း I သိပြီးသားပါ။ I ကို မမှတ်မိဘူးဆိုရင် MZ မှာဖွပစ်လိုက်မှာနော် :P
Alexander ဆိုတဲ့ အသံတောင်မကြားချင်ဘူးဆိုရင်တော့ sorry ပါ
( နိုင်ငံရေးတွေပါသွားပြီ :P )
happymonkey က အိချမ်းပိုမှန်း i သိပြီးသားပါ။ i ကို မမှတ်မိဘူးဆိုရင် mz မှာဖွပစ်လိုက်မှာနော်
( နိုင်ငံရေးတွေပါသွားပြီ )
အဲလိုကြီးဖော်ကောင်မလုပ်နဲ့လေ.. တော်ကြာ မော်မော်ကြီးရဲ့ ဟိုဟာလည်း တွေ့သွားမှ မော်မော်ကြီး စန္ဒရားရေ. သားသားပါဘူးနော်..
အဲလို windows repair ပြန်လုပ်တာ၊ ပြန်တင်တာ မလုပ်ပဲ တခြားကောင်းတဲ့နည်းလမ်းမရှိဖူးလားဟင် .. ဘာ virus လဲဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ.. အဲဒါကို ဘယ် antivirus နဲ့သတ်ရင် ကောင်းမလဲ .. မေးခွန်းများတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့နော် .. သိချင်လို့ပါ.. ပြန်ဖြေပေးတဲ့ မအိကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. :6:
nan wrote: »
ဘာ antivirus တင်ထားလဲ kaspersky2009 ဒါမှ ့မဟုတ် nod32 အဲ့ဒီတွေနဲ ့full scan ဖတ်ပေါ့ဗျ ဘာ virus လဲဆိုတာကိုတော့ မြင်ရတာမဟုတ်တော့မသိနိုင်ဘူး virus ဟုတ်မဟုတ်လဲ
မမြင်ရတော့မသိနိုင်ဘူး print screen ဖမ်းပြီးတော့တင်ပေးပါလား အဲ့ဒါမှ၀ုိင်းစဉ်းစားလို ့ရမှာပါ
အဲဒိပြသနာက virus သေသွားလို ့ဖြစ်တာပါ virus မသေသေးရင် မပေါ်ဘူး virus ကိုက်နေတဲ့ explorer.exe ကို သတ်လိုက်တာမှာ file association link တွေပျက်ကုန်တာပါ ပြန်ချိတ်လဲ နားမလယ်တော့ဘူး သက်ဆိုင်တဲ့ file တွေပျက်ကုန်တာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့ original file တွေပြန်ကူးပေးရင်ရမှာပေါ့ ဘယ်file ကူးရမှန်းမသိတာကြောင့် windows repair or reinstall လုပ်တာပိုမြန်တယ်ပြောတာ မအိအိသိတာတော့ပြန်တင်တာကအမြန်ဆုံးနဲ့ ပြသနာအနည်းဆုံးပဲ
Alexander အသံမကြားချင်လို့ MZ မ၀င်ကြေးဆို MZ မှာ မိန်းကလေးမင်ဘာတောင် ရှိပါ့အုံးမလား :P ။
အဲဒီအကိုက လောကမှာသတ်ပစ်သင့်တဲ့ ယောက်ကျားတွေထဲမှာထိပ်ဆုံးကပါတယ်။
သူသေသွားရင် တခြားယောက်ကျားလေးတွေအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ များကြီးပေါ်လာနိုင်တယ်။
( မမိုးသက်ထား ဒီသရက်မဖတ်မိပါစေနဲ့ :63::63: )
zarchi wrote: »
စိတ်ချရအောင် pm လေးပို့ထားပေးမယ်နော်..... :d:d:d နောက်တာနော် ကိုအလက်ဇန်းဒယား ချိတ်ချိုးရဝူး...
Ekkkkkkkkkkk.... ဖွတယ်..:14: မှတ်မိပ.... နာမယ်ကြီးနဲ ့ကိုဖွလိုက်တာလား ဖရန် ့ရ.:2:
မျောက်မျက်နှာဘယ်နားသွားထားရပါ ့..:2: အီး.................
ဒါနဲ ့စကားမစပ် Alexander ဆိုတဲ ့နာမယ် မကြားခြင်ဘူးလို ့မျောက်လည်းမပြောရပါလား..:71:
ဟီးဟီး ခုတော့မောင်နှမဖြစ်သွားပြီ :P
အိချမ်းပိုကလဲ -- ရဲ့ -- လို့မပြောရဘူး။ ၀င်တာမှမကြာသေးဘူး Post က နဲနဲနောနောမဟုတ်ဘူး :P
ဟိုတစ်ယောက်ကလဲ ၀င်မပြောပဲ ပုန်းနေတာ Thanks ကျတော့ လုပ်သွားတယ် ဟားဟား )
ကိစ္စမရှိပါဘူး ကိုစိုင်းရ။ ကျွန်တော် ကတော့ PM မပို့ပါဘူး စိတ်ချ။ အပြင်မှာ ပဲပို့မှာ။ ခင်ဗျားနဲ့မိုးသက်ထား နှစ်ယောက်လုံးမော်ကျွန်းပြန်ရောက်မှ ။ မပို့စေချင်ရင် လိုက်တိုက် :P ။
MZ Meeting မတက်လိုက်ရတာနာတယ်။ နောက်တစ်ခါ မော်ကျွန်းမှာလာလုပ်နော် ဟီးဟီး
မင်းဟာက Folder ပြဿနာမဟုတ်တော့ပဲ Alexander ပြဿနာဖြစ်နေပြီ။
ဖွချင်လဲ အပြင်မှာသာဖွတော့ ... ဒီမှာမဖွနဲ့တော့ .... :14:
ငါ ... မနန်းပြဿနာလေး ၀င်ရေးပေးချင်လို့ ၀င်လာတာ ... မဟုတ်ရင် မသိချင်ယောင်ဆက်ဆောင်နေဦးမှာ။ ခုတော့ မနေတော့ဘူး။ မင်းလဲမရေးနဲ့တော့။
မနန်း ရဲ့ ပြဿနာအတွက် ဒီ Link မှှာ NOD32 VBS[Butsur.A,B]-Fix ဆိုတဲ့ Software လေးကို Download ချလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ... Run ပါ။
ပထမဆုံး I agree နှိပ်ရပါတယ်
ပြီးရင် ... Scan & Clean with NOD ဆိုတာလေးကို Tick ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ( အပေါ်ကနှစ်ခုကို ဒီတိုင်းထားရပါမယ်)
ပြီးရင် Do it now ကိုနှိပ်ပါ။
Please enter path to your USB/HDD drive ဆိုတာပေါ်လာရင် C: or or Memory Stick ( ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ Device ) ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် ပြီးသွားပါပြီ။ စက်ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ။
အဲလို ပြဿနာဖြစ်နေတဲ့ Memory Stick တွေကို အဲဒီနည်းနဲ့ပဲရှင်းတာပါ။ HDD ကိုတော့ ကျနော်မဖြစ်ဖူးသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ခုလိုရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပဲနော် ကိုAlexander ... မအိပြောသလိုပဲ စက်ကို ၀င်းဒိုးပြန်တင်လိုက်ပြီ .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုဟာလေးလဲ ဒေါင်းသွားပါတယ် မှတ်လဲမှတ်ထားပါ့မယ် .. အဲလိုထပ်ဖြစ်ရင် ဒီဟာလေးသုံးရတာပေါ့ .. ဒါပေမယ့် နန်းစက်က drive တွေက ဘာမှ မဖြစ်ဖူး folder တွေ file တွေ ဖွင့်လို့မရတာ .. C: , , other drive letter တွေ အကုန်ဖွင့်လို့ရတယ် .. ခုတော့ ၀င်းဒိုးပြန်တင်လိုက်တယ် အေးရော .. ဟီးးး